ဂန္ဒာရီဆြာအုပ် နှင့် (၃) မိနစ်အတွင်းဆရာ ဖြစ်နည်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဂန္ဒာရီဆြာအုပ် နှင့် (၃) မိနစ်အတွင်းဆရာ ဖြစ်နည်း
ဂန္ဒာရီဆြာအုပ် နှင့် (၃) မိနစ်အတွင်းဆရာ ဖြစ်နည်း
Posted by ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ် on Jul 11, 2012 in Copy/Paste | 29 comments
(၃) မိနစ်အတွင်းဆရာ ဖြစ်နည်း ကိုသိချင်တာလား ဟဲဟဲ လွယ်လွယ် နဲ့ တော့ ဘယ် ပြောအုံးမလဲနော်.. အရင်မိတ်ဆက်ပါရစေဦး.. ကျုပ်လား.. ဂန္ဒာရီဂျာအုပ် လို့ခေါ်ပေါ့ဗျာ.. လောကကြီးမှာ ဆရာဝန်၊ ကျောင်းဆရာ၊ ဗိန္ဒောဆရာ၊ ဆိုက်ကားဆရာ၊ မြင်းလှည်းဆရာ စတဲ့ ဆရာ့ ဆရာတွေ ကြား ကျုပ်လည်း ဆရာ လို့ ခေါ်ခံချင်တာကစတာပဲ.. ခက်တာက ဆေးမကုတတ်၊ စာလဲမသင်တတ်၊ ဆိုက်ကားတွေ မြင်းလှည်းတွေလဲ မမောင်းတတ်တော့.. အင်း ဘာမှ လုပ်စရာမလိုပဲ ဆရာဖြစ်နည်းကို ဦးနှောက်ခြောက်မတတ် စဉ်းစားရာက အပြင်းထူတဲ့ ပါရမီဓာတ်ခံ လေးလဲရှိတော့ အော်တော်ငုတ်တုတ် ဆရာဖြစ်တဲ့ နည်းကို လွယ်လွယ်လေးပဲ စဉ်းစားလိုက်မိသဗျ.. ဒါနဲ့ (၃) မိနစ် အတွင်း ဆရာဖြစ်သွားပါလေရော..
ဘာကွ (၃) မိနစ်အတွင်း ဆရာဖြစ်နည်းဆိုပါလား ဆိုက်ကားဆရာဖြစ်ချင် ရင်တောင် ဆိုက်ကားနင်းတတ်ဖို့ နေ့ဝက်လောက် လိုတယ် မင့်ဟာကဖြစ်နိုင်ပါ့မလား ကွယ် လို့တော့မမေးနဲ့ အာမခံ နဲ့ကို လုပ်ပေးမှာ.. အဲ တစ်ခုတော့ လိုတာပေါ့နော် ဆရာကြီးအီကြာကွေးပြောတဲ့ ဖွတ်ကလိဒင်္ဂါးပေါ့ကွယ်..အဲဒီ ဖွတ်ကလိဒင်္ဂါး လေးခပ်များများလေးသုံးလိုက်တာနဲ့ (၃) မိနစ်အတွင်းဆရာဖြစ်ပါရော.. လူတိုင်းက ကိုယ့်ကို ဆရာလို့ကို သတ်မှတ်သွားကြမှာဗျ.. ကဲမလွယ်လား ကျုပ်လဲဒီနည်းနဲ့ ဆရာလုပ်နေတာဗျာ.. ဘာဆရာလဲဆိုတော့ ဘယ်သူ့ကိုမဆို အမိန့်ပေး၊ ကောင်မလေးတွေက အမြဲပြုံးပြ၊ ဘယ်နေရာမဆို မျက်နှာပန်းလှတဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာပေါ့.. ယုံပြီနော်.. ကင်မလာ တစ်လုံးကို ၀ယ်ပြီးတော့သာ ခပ်တည်တည်နဲ့ လည်ပင်းဆွဲထားလိုက် ခင်ဗျားကို ဓာတ်ပုံဆရာဆိုပြီး လူတိုင်းက မိနစ်ပိုင်း အတွင်း သတ်မှတ်သွားကြလိမ့်မယ်ဗျ.. မားမားစားဖို့စောင့် တာကမှကြာပါဦးမယ်နော်..
အဲ ဓာတ်ပုံရိုက်တတ်ဖို့လွယ်လားဆိုရင်တော့ လွယ်သမှသိပ်လွယ်. ငှက်ပျောသီး အခွံနွှာစားတာကမှ အားကုန်သေးသဗျ.. ဦးကျော်ပြောသလိုပြောရင် လက်ညှိုးလေး ကွေးတတ်ရင်ရပြီ.. အဲလောက်လွယ်လား ဆိုရင်တော့ အာပါး ပြောတာကမှကြာဦးမဗျ.. ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်လေဗျာ.. ကင်မလာအပေါက်ထဲကချောင်း အကုန်ပါရင် ခလုပ်သာနှိုပ်လိုက်ပေတော့ဗျို့..
ဒါပေမယ့် ဆရာနဲ့တူအောင်တော့ ကင်မလာဝယ်ကတည်းက အလတ်စားလောက် ၀ယ်ပေါ့ဗျာ.. ဒါမှ ဖိန့်ဖိန့် လုပ်နိုင်မှာကိုး.. ကင်မလာ အမျိုးအစား ၄ မျိုးရှိသဗျ
ပလို . ဆိုပြီးကြားဖူးသဗျ..
ကော်ဆူးမား ဆိုတာကတော့ အများဆုံးကိုင်နေကြတဲ့ လက်တ၀ါးစာ ကင်မလာလေးတွေကိုခေါ်သဗျ..
ပလိုဆူးမား ကတော့ ပလို နဲ့ ကော်ဆူးမား ကိုပေါင်းထားတဲ့ ကင်မလာ အလတ်စားလေး တွေကိုခေါ်သဗျ..
ဆင်မြှီးပလို ကတော့ ပလိုဖက်ရှင်နယ် အတိုင်းဖြစ်သွားပြီးပေါ့ဗျာ..
တော်တော်များများ ဓာတ်ပုံဆရာတွေတောင် ဆင်မြှီးပလို ကိုပဲသုံးကြသဗျ..
ပလို ကတော့ ဈေးလဲကြီးတယ် လေးလဲလေးတယ်.. အလတ်စားလောက် ၀ယ်ဆိုတာက ပလိုဆူးမား လောက်ကို ၀ယ်ရင်ရပါပြီ.
အဲ ဆရာဖြစ်သွားပြီးဆိုရင်တော့ ဆရာအိုက်တင် တော့ ဖြစ်ရမယ်.. ဆရာအိုက်တင် အပြည့်ရှိရမလို ဘာတွေကိုဘယ်လို သတိထားရ မလဲဆိုတော့
နောက်က LCD အပြင် အပေါ်မှာ ချောင်းကြည့်ပေါက် ကလေးရှိသဗျ.. အဲဒီအပေါက်ကကြည့် LCD ကမကြည့်နဲ့ ဒါမှဆရာ အိုက်တင်ဖြစ်မှာ ဓာတ်ပုံ ဆရာဆိုရင် ဘယ်တော့မှ LCD ကမကြည့်ဘူးဗျ
ကင်မလာကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကိုင် ဘယ်ဖက် လက်ဖ၀ါးပေါ် ကင်မလာတင် မှန်ဘီလူးကို လက်မနဲ့ လက်ညှိုးနဲ့ ထိမ်းထား၊ ညာဖက်က လက်ကိုင်ကိုလက်သုံးချောင်းနဲ့ကိုင် လက်ညှိုးကို ခလုပ်ပေါ်တင်
ထောင်ရိုက်မယ်ဆိုရင် ညာဖက်လက်ကို အပေါ်ထား
ကိုယ်ကို နဲနဲနှိမ့် ဒူးနဲနဲကွေး ကင်မရာကို အရိုက်ခံ တဲ့သူရဲ့ ရင်ဘတ်လောက်နဲ့တန်းတူထား အပေါ်ကလဲ စီး မရိုက်နဲ့ အောက်ကလဲပင့်မရိုက်နဲ့ သူထိုင်ရင် ကိုယ်လဲထိုင်ရိုက်
နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာက ကပ်မရိုက်နဲ့ အရမ်းလဲမခွာနဲ့ ၁၀ ပေအတွင်းလောက်ကနေရိုက်.. တယ်လီပသီ နဲ့လှမ်းဆွဲချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အဝေးကနေလှမ်းဆွဲ လို့ရတယ်.
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဒေါင်းဖန်ဝါနေမင်းနဲ့ ပါဝါတူတူပဲလို့မှတ်ပြီး နေရှိတဲ့ ဘက်မှာပဲ အမြဲနေ
နေ့ခင်းကြောင်တောင်ရိုက်မယ်ဆိုရင် နေရောင်အောက်မှမရိုက်နဲ့ အမိုးအောက်မှာရိုက်. နေရောင်အောက်မှာရိုက်ရင် အရိပ်ကျတယ်.. မျက်မှောင်ရှုံ့မယ်.. အဲမတတ်သာလို့ရိုက်ရမယ် ဆိုရင် ဖလက် ဖွင့်ရိုက် နေပြောက်တွေကျနေတဲ့နေရာမှာ မရိုက်နဲ့
ကင်မလာ ဖန်ရှင်မှာ M,A,S,P,Auto…စသဖြင့်ပါတယ် Auto ကိုတော့မထားနဲ့ P မှာထားရိုက်
တစ်ခါရိုက်ရင် ၂ ပုံလောက်ရိုက် တစ်ခါတစ်လေ မျက်စိမှိတ်သွားတတ်တယ်
10. ပုံကွာလတီကိုတော့ 4×6 လောက်ပဲထုတ်မယ်ဆိုရင် 5MB လောက်ဆိုရတယ်..
11. ရိုက်ပြီဆိုရင် “အိုကေ ရိုက်မယ် ၀မ်း..တူး..သရီး.. ခေါ်ရိုက်” ဒါမှ ဓာတ်ပုံဆရာနဲ့တူမှာဗျ.. တိုင်ပင်လေးခေါ်ပေးတော့ အရိုက်ခံတဲ့သူလည်း အဆင်ပြေတာပေါ့နော်
12. နောက်ပြီးတော့ ခလုပ်ကို ဒီအတိုင်း နှိပ်မချပါနဲ့ အဲဒီခလုက်လေးမှာ ၂ ဆင့်ပါတယ်.. half press နဲ့ full press ဆိုပြီးတော့၊ half press ဆိုတာက ခလုပ်ကို အကုန်မဖိချပဲ တစ်ဝက်ပဲဖိလိုက်တာ ကိုပြောတာပါ။ ဒီအချိန်မှာ ကင်မလာက ဆပ်ဘဂျက်ကို ဖိုးကပ် သွားလုပ်ပါတယ် ကင်မလာကနေကြည့်ရင် အလယ်မှာ + ဒီလိုကြက်ခြေခတ်လေး ဒါမှမဟုတ် [ ] ဒီလိုကွင်းလေးပါသဗျ.. အဲဒါကို ဖိုးကပ်လို့ခေါ်ပါတယ်.. ရိုက်မယ့် သူကို အဲဒါလေးနဲ့လှမ်းထောက် ပြီး half press အဖြစ်အရင်နှိပ်ပြီး ဖိုးကပ်ဖြတ်ရသဗျ .. နောက် full press အဖြစ် ထပ်ဖိလိုက် တော့မှရိုက်သွားတာ ဖြစ်ပါတယ် တကယ်လို့ တစ်ခါတည်း ဖိချလိုက်ရင် ဖိုးကပ်ဖြတ်ချိန်မရတဲ့ အတွက် ပုံတွေ ၀ါးသွားနိုင်ပါတယ်။
ကဲဒါကတော့မိနစ်ပိုင်း အတွင်း ဆရာဖြစ်နည်းပေါ့ဗျာ. ကျုပ်တတ်သလောက်တော့ အိတ်သွန်ဖာမှောက် ပြောပြီးသွားပြီဗျိူ့.. ထပ်တော့မမေးပါနဲ့ ပိုလဲမသိတော့လို့ပါ .. နောက်ထပ်ဖတ်လာပြီး ဆရာ လာလုပ်ပါအုံးမယ်
ဝယ်တော့ဘူး ကင်မလာဆိုင်ဝင်ပီး ဒမြတိုက်ကြမယ် လိုက်မလား :grin:
ဆြာက ၅ပါးသီလ စောင့်ထားတယ်မှီးရဲ့.. မလိုက်ပါရစေနဲ့.. အစီအရင်တွေပေးလိုက်မယ်နော်..၇ှိတဲ့သူတွေ ကိုယ့်ကို မတွေ့နိုင်အောင် တွေ့တဲ့သူတွေမအော်နိုင်အောင်.. ၂ လက်မ ဆိုလိုတိပ်ကို တစ်ထွာစီ ဖြတ်ပြီးဆောင် သွားနော်
ဟိုက်ရှားဘား တယ်မျက်နှာပွင့်ပါလား.. ချက်ချင်းကို အားပေးတာပဲ. ဆြာတောင် အကြွေးဝိုင်းနေလို့ ပါမှီးရယ် နှော်.. ဆြာအုပ်ပါဂျ.. အကြွေကြေရင်တော့ မှီး ကိုဦးစား ပေးပါမယ် နှော်
အော် ဆြာအုပ်ဖြစ်ဖြစ် ဆြာဘုတ်ဖြစ်ဖြစ် အတူတူပါဘဲ
ဆြာနော် မီးကို အရင်ဝယ်ပေးရမယ် တိလား
တောင်ရှည်ရော ဦးထုပ် ရော ဖွတ်ထားမှဖြင့် ဆြာ တေပီပေါ့ကွယ်.. ဦးထုပ် ဖွက်ချက်ဖွက်ပါကွယ် တောင်ရှည်တော့ လုပ်ပါနဲ့
မေးပါရစေ ချာအုပ် ခညာ ..
တောင်ရှည်ကို ဘာကြောင့် မဖွတ်စေဂျင်ဒါဘာလဲ ခည ..
တောင်ရှည်ဂို ဥူးထုပ်ထက် ပို၍ နှစ်သက်လို့ ပါလား ခည …
အင်တာဗူး ဘရစေ ခည ….
မစ်ချတာ တောက်တဲ့တို့ အရေခွံလဲပြန်ဘီနဲ့တူတယ်
စီးပွားရေးအတော်လုပ်ပုံပဲ..အရေခွံလဲတဲ့ တောက်တဲ့လဲမဟုတ်ပါဗျာ.. ဒီနေ့မှဝင်လာတဲ့ အသစ်စက်စက်ရွာသားလေးပါ
အဆင့်လိုက် ရှင်းပြပေးထားလို့ ကျေးကျေးပါဗျို့..
မားမား စားဖို့ စောင့်ရတာမှ ကြာဦးမယ် ဆိုပါလား။
ဒီနေ့မှ ၀င်တဲ့ အသစ်စက်စက် ရွာသား ဆိုပါလား။
လား လား လား လားးးးးးးးးးးးးးးးးးး
(ဒါပေမယ့် အမတ်နဲ့တွေ့တော့ တပည့်ဖြစ်သွားတယ်။)
ဒီလေသံတွေက ကြားဖူးနေသလိုပဲ ရွာထဲကတစ်ယောက်ယောက်များ နွားရူး အဲလေ နယူးဗားရှင်းနဲ့ ပြန်ဝင်လာဒါလားဟင်င်င်….
အိမ်.. လာပြန်ပီ တစ်ယောက်. ဟွန်း ..အသစ်ကလေးပါဆို ဆြာက နွားရူးနဲ့လဲ ရှင်းပါတယ်နော်..
မှန်ရာကို သစ်စာဆိုပါမည်.. ဘုရားစင်မှာ တင်တာ စွန့်ပါသည်..
ပြန်လာခဲ့မယ် ဗျာ .. ခဏလေးနော့ …
စုံထောက်ကိုအောင်တိုက်ကို စုံစမ်းခိုင်းလိုက်ရင် အဖြေပေါ်ဘာဒယ်ဗျာ……… ဟင်း ဟင်း ဟင်း
(ဗိုလ်အောင်ဒင်လေသံဖြင့်ဖတ်ရန် :grin: )
ဂန္ထဝင် လဲ မဟုတ် ဒဏ္ဍာရီ လဲမဟုတ်..နှစ်ခုကို မစ်ခ်စ် လုပ်ထားတဲ့ ဂန္ဒာရီဆြာအုပ် ဆိုပဲ..
ကျော်လဲ ဆြာလုပ်မို့ ..ဆြာအုပ်စီမှာ သုံးမိနစ်သင်ဒန်း လာတက်သွားပါဒယ်..
သင်တန်းကြေးကိုတော့ ဘီအီးပုလင်းရောင်းပြီးရင် ပေးမယ်ဗျို့ ..
၄စားစွာဖြင့် ဂမ္ဘာရီ ဆြာဗိုက်
သများလည်း ပြန်လာပါ့မယ်ချင့် ..
သများ …အိမ်ပြန်အိပ်ဖြစ်ရင်ပေါ့ ..
ဆြာအုပ် ပြောသလိုပဲ စော်ကြည်ဆရာလုပ်တော့မယ်
ဒီအရေးအသားကတော့ ကောင်းကောင်းကြီးကို ရင်းနှီးနေတာ
အသစ်ဆိုတော့ လဲ အသစ်ပေါ့
“ကောင်မလေးတွေက အမြဲပြုံးပြ၊ ဘယ်နေရာမဆို မျက်နှာပန်းလှတဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာပေါ့.. ယုံပြီနော်”
အာလကေများပေါလို့ ကတော့ ၊ တီလုတ် ဆီမီပလို လေးတစ်လုံးလောက် ပြေးဝယ်ပြီး ပန်းခြံထဲက စကီအလန်းဇယားလေးတွေ ကို ဖရိတ်ကြီးတွေ တစ်ဝကြီး ရိုက်ပေးဦးမှာ….
ရွာထဲ photographer တိုးလာလို့ ၀မ်းသာပါတယ်ဗျာ။ ဒါ့ထက် အမှတ်မှားမှာ စိုးတာလေး တစ်ခု၊ နှစ်ခု လောက် တော့ပြောပါရစေဗျို့  …။ PRO-DSLR မှာ ဘာလို့ များ Full-Frame တွေ မပါရတာလဲဗျ။ သိရသလောက်ကတော့ (Canon သုံးလို့ပါ။) 1100D ကို entry Level လို့များ ခေါ်သလားလို့ပါ။ MPS – မိုးရာသီ အထူးဈေးရောင်းပွဲမှာတော့ အဲ့ အလုံးကို ShowRoom ဈေး လေးသိန်းခွဲ ပါတဲ့။ ဘာပဲ ပြောပြော အားပေးပါတယ်။ မှန်ဘီလူး အကြောင်းလေးတွေ ရေးတင် စေချင်ပါတယ်။ ရွာထဲမှာ Photography နဲ့ ပတ်သတ် တဲ့ ပိုစ့်တွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒါလေးတွေလဲ ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
ဟဲဟဲ အဲဒါတွေတော့ သိဘူးဂျ.. ၃ မိနစ်ဆြာ ချိုနေမှဘဲ..
ဒီ link လေးကို ကြည့်ကြည့်ပါဗျို့  .. အဲဒါ ကျန်ခဲ့လို့ လာပြေတာ …။
မစ္စတာ တောက်တဲ့ ရေ.. ဘာကြောင့်တောင်ရှည်ကို မဖွက်စေချင်ဒါလဲဆိုတော့.. တောင်ရှည် မို့လို့ပေါ့ကွယ်..ဆြာ အတွက်တော့ တောင်ရှည်က ပိုအရေးကြီးပါသကွယ် …
ဦးထုပ်ကို ဖွက်ချင်ဖွက်ပြောတာက ဦးထုပ်မရှိလဲအဆင်ပြေလို့ပေါ့ကွယ်..
ရွာထဲက ဆြာမချောချောလေးတွေကို အောက်ဒိုးပုံ ၅၀စီလောက်ရိုက်ပေးပြီးရင်တော့ ရွာထဲက ဆြာ့ ဆြာဂျီးဒွေက တကယ့်ဆြာဟုတ်မဟုတ်အကဲဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်ကွယ်
အင်း တဘောတူတယ်ဂျို့.. အဲဒီ ဆြာမချောချောလေးတွေ ခေါ်ခဲ့နော်.. ကျန်တာ အနော့ တာဝန်ထား